Horyaalka Dalkeena Oo Habsami U Socda Iyo Heegan Oo Ka Adkaatay Banaadir Telecom + Sawiro
Walli waxaa si xiiso leh ugu sii soconaya garoonka Jaamacadaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir ciyaarihii horyaalka 37-aad ee Somalia oo bishaan ka furmay halkaas.
Maalintii shalay ayaa kulan aad u xiiso badan wuxuu dhexmaray kooxaha Heegan iyo Banadir Telecom waana kulan kamid ah kulamada ugu xiisaha badan ciyaaraha horyaalka Somalia oo afarta galab ee la ciyaaro ay u so daawasho tagaan dadweyne aad u farabadan.
Labada naadi ayaa ah kooxaha ugu awoodda badan xilligaan dalka Somalia naadiyadiisa kubadda cagta ayaa waxaa ay ciyaartooda kusoo dhamaatay 3-2 ay ku badisay kooxda Heegan ee ciidanka Booliska Somaliyeed.
Kadib markii ay dhamaatay ciyaartaas ayaa gudoomiyaha kooxda Heegan Cali Shiino u sheegay webseedka www.deeyoo.com inuu rajo ka qabo inuu qaado horyaalka soconaya isla markaasna ay si weyn ugu soo diyaar garoobeen kulankas.
Ciyaartaan ayaa waxaa dhex dhexaadinayay Garsoore Saalax Cumar Abuukar oo ah garsoore caalami oo ka tirsan 9-ka Garsoore ee Fifa ugu jirta Somalia waxaana intii ciyaartaas socotay uu bixiyay Garsoore Saalax calaamad casaan ama Rooso.
Walli waxaa si xiiso leh ugu sii soconaya garoonka Jaamacadaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir ciyaarihii horyaalka 37-aad ee Somalia oo bishaan ka furmay halkaas.Maalintii shalay ayaa kulan aad u xiiso badan wuxuu dhexmaray kooxaha Heegan iyo Banadir Telecom waana kulan kamid ah kulamada ugu xiisaha badan ciyaaraha horyaalka Somalia oo afarta galab ee la ciyaaro ay u so daawasho tagaan dadweyne aad u farabadan.
Kadib markii ay dhamaatay ciyaartaas ayaa gudoomiyaha kooxda Heegan Cali Shiino u sheegay webseedka www.deeyoo.com inuu rajo ka qabo inuu qaado horyaalka soconaya isla markaasna ay si weyn ugu soo diyaar garoobeen kulankas.Ciyaartaan ayaa waxaa dhex dhexaadinayay Garsoore Saalax Cumar Abuukar oo ah garsoore caalami oo ka tirsan 9-ka Garsoore ee Fifa ugu jirta Somalia waxaana intii ciyaartaas socotay uu bixiyay Garsoore Saalax calaamad casaan ama Rooso.